जतापनि श्रमजीवि नै मारमा ! « Media for all across the globe
जतापनि श्रमजीवि नै मारमा !
नेपाल न्यून दैनिक
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले संसार नै बन्दाबन्दीमा बाँधेपछि प्रभाव कहाँसम्म देखिएन र? कोरोनाले संचार जगतलाई थला पारेपछि सबैभन्दा मारमा पत्रकार नै परेका छन्। बन्दाबन्दीका कारण पत्रकारको तलब काटिएको छ। कतिपय त बेतलबी काम गरिरहेका छन्। हेर्दाहेर्दै अवस्था यस्तो आयो कि– धमाधम प्रतिष्ठित संचारमाध्यमबाट पत्रकारहरु हटाइँदैछन्।
केहिदिन अघिसम्म पत्रकारको तलब काटिएका, बेतलबी बसाएका, हटाउँन लागेका समाचारहरु नेपालमै पढ्न–सुन्न पाइन्थ्यो। कोरोना कहरले आर्थिक मारमा परेका संचारमाध्यमहरु, आफ्नै पत्रकारहरुलाई मारमा पार्न थालेका छन्। छिमेकी भारतको प्रतिष्ठित अंग्रेजी पत्रिका द हिन्दूमा कार्यरत २० जना पत्रकारहरु निकालिएको समाचारले दक्षिण एसियाको संचार जगत तातिएको छ। मुम्बई ब्यूरोमा काम गरिरहेका ती पत्रकारहरुलाई राजीनामा गर्न र सम्पादकीय जिम्मेवारी घटाउन ब्यबस्थान पक्षले निर्देशन दिएको द वायरले जनाएको छ।
१४२ वर्ष पुरानो द हिन्दू पत्रिकाले मुम्बई संस्करण सन् २०१५ देखि चर्चगेट सुरु गरेको थियो। यहाँ करिब दुई दर्जन बढी पत्रकारहरु कार्यरत रहेको बताइएको छ। मुम्बई संस्करणमा काम गरिरहेका पत्रकारहरुले महाराष्ट्र राज्यको समेत रिर्पोटिङ गर्थे। श्रमजीवि पत्रकारहरु निकाल्ने द हिन्दू भने एक्लो पत्रिका होइन। अर्को अंग्रेस पत्रिका इकोनोमिक टाइम्सले पनि बन्दाबन्दी समयभित्रै बिभिन्न ब्यूरोमा काम गरिरहेका पत्रकारहरु तह लगाइसकेको छ।
संचार सबैभन्दा ठुलो समूह टाइम्स अफ इण्डियाले पनि केही संस्करणहरू आर्थिक मारकै कारण बन्द गरेको छ। मराठी पत्रिका सकाला टाइम्सको छापा संस्करण बजारमा आउँन सकिरहेको छैन। पत्रिका नै बन्द भएपनि कार्यरत ५० बढी कर्मचारीहरूलाई लिकालिएका छन्।
यसैगरी अंग्रेजी पत्रिका टेलिग्राफले २ ब्यूरो बन्द गरेपछि लगभग ५० कर्माचारीले राजीनामा दिएर घरमै बस्न थाले। हिन्दुस्तान टाइम्स समूहले पनि १ सय ५० कर्मचारी हटाएको छ। डिजिटल मीडिया संस्थान द क्विन्टले आफ्ना धेरै कर्माचारीहरूलाई बेतलबी बिदामा पठाएको छ। भारतीय संचार जगतमा कार्यरत पत्रकारहरुको अशुभ समाचार अलभग नेपाली संचारमाध्यमहरुको घर–आगँनसम्म पुग्नै आटेको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्र धोस्त बनाएपछि संचारमाध्यमका मालिकहरु महामारी कै बेला श्रमजीविलाई घर न घाटको बनाउँदैछन्।